Ndinokwenza Ntoni Xa Umzali Wam Egula? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikamba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPangasina IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ulutsha oluninzi aluzikhathazi ngokukhathalela abo bagulayo. Ngapha koko, kusenokuthatha iminyaka ngaphambi kokuba bagulelwe ngabazali.
Kuthekani ukuba ugulelwa ngumzali usemncinci? Khawuve ngabantu ababini abakhe behlelwa yile ngxaki.
Umama une-Ehlers-Danlos syndrome (EDS), isifo esinganyangekiyo esichaphazela amalungu, ulusu namajoni omzimba.
Alikho iyeza lesi sigulo ibe imeko kamama iye yaba maxongo kule minyaka ilishumi idluleyo. Kuye kwakho amaxesha apho aphantse wafa ngenxa yokuphelelwa ligazi emzimbeni okanye ngenxa yokuva iintlungu axolele nokufa.
Mna nentsapho yam singamaNgqina kaYehova ibe ibandla lethu liye lasithuthuzela sonke! Ngokomzekelo, kutshanje intombaza elingana nam ithumele ikhadi kwintsapho yam isixelela ngendlela esithanda ngayo yaye isiqinisekisa ukuba iza kusixhasa xa sidinga uncedo. Kumnandi nyhani ukuba nomhlobo onjalo!
IBhayibhile indincede kakhulu. Ngokomzekelo, esinye sezibhalo endizithandayo sikwiNdumiso 34:18, ethi: “UYehova usondele kwabo baphuke intliziyo.” Kwakhona, ndithanda namaHebhere 13:6, athi: “UYehova ungumncedi wam; andiyi koyika.”
Isibhalo sokugqibela amaHebhere 13:6 ndisifumanisa sibaluleke ngokukhethekileyo. Eyona nto indoyikisayo kukuba umama uza kusweleka. Ndimthanda kakhulu ibe ndiyalubulela usuku ngalunye endiluchitha ndikunye naye. Le vesi yeBhayibhile indinceda ndiqonde ukuba nokuba ndidibana nantoni na kwixesha elizayo, ndinokuzithemba.
Ikhona nenye into endoyikisayo. Uyabona, isifo i-EDS sisifo semfuza. Umama wasifumana kumama wakhe ibe mna ndisifumene kuye. Nam ke ndine-EDS. AmaHebhere 13:6 andenza ndiqiniseke ukuba uYehova uza kuba ‘ngumncedi wam’ nakule ingxaki.
Okwangoku, ndizama ukuxabisa oko ndinako ngoku kunokuzixhalabisa ngezinto ezidluleyo nezexesha elizayo. Ndingazibhaqa sele ndingonwabanga xa ndinokuthelekisa izinto angakwaziyo ukuzenza umama nezo wayekwazi ukuzenza ngaphambili. IBhayibhile ithi izilingo esidibana nazo ngoku ‘zezokwexeshana yaye zincinane’ xa zithelekiswa nethemba lobomi obungunaphakade apho kungasayi kubakho kugula.—2 Korinte 4:17; ISityhilelo 21:1-4.
Khawucinge ngoku: Yintoni enceda uEmmaline akwazi ukuhlala enethemba? Unokuhlala njani unethemba xa ujongene nobunzima?
Xa ndandikwisikolo samabanga aphakamileyo, utata waqalisa ukuba noxinezeleko. Kwakungathi utata wam endimaziyo akekho ibe ngoku kukho umntu othathe indawo yakhe. Ukususela ngelo xesha, utata ebesoloko engonwabanga, esoyika ngokungenasizathu ibe esiba namaxhala. Ngoku sekuyiminyaka eli-15 enale ngxaki. Kufanele ukuba kubuhlungu nyhani ukuhlala engonwabanga nangona esazi ukuba asikho isizathu sokuba avakalelwe kanjalo!
SingamaNgqina kaYehova ibe ibandla esikulo belisoloko lisixhasa. Abantu esikhonza kunye nabo banobubele ibe akho namnye okhe wenza utata avakalelwe kukuba akaloncedo ebandleni. Ukubona indlela utata ayinyamezele ngayo le ntlungu kundenza ndimthande kakhulu.
Ndiyamkhumbula utata wam endimaziyo—owayengabi naxhala, ekwakungekho nto imkhathazayo nowayonwabile. Ndiva kabuhlungu xa kufuneka elwe notshaba olungabonakaliyo nolungaphakathi kuye mihla le.
Sekunjalo, utata wam wenza unako nako wokuzama ukuhlala engula mntu ndimaziyo. Kwakusithi kusakubakho le ngxaki yakhe, azame ngandlela zonke ukufunda iBhayibhile, nokuba ziivesi ezimbalwa suku ngalunye. Loo nto yamomeleza kakhulu. Nkqu nesihlandlo sokufunda esasisincinci sasindisa ubomi bakhe. Kwesa sihlandlo sokuxinezeleka ngamandla, utata wandivuyisa ngendlela angazange wandivuyisa ngayo.
Ndisithanda nyhani isibhalo esikuNehemiya 8:10, esithi: “Uvuyo lukaYehova ligwiba lenu.” Yinyaniso leyo. Uvuyo endiba nalo xa ndisebandleni, ukunikela iintetho, ukugqabaza, nokwenza loo nto yenziwayo kwiholo yobukumkani kuzalisa intliziyo yam xa inezikhewu. Oko kubangela ukuba kuthi ngco ngaphakathi kum imini yonke. Umzekelo katata undifundise ukuba nokuba ujamelana nengxaki enjani, uYehova uya kusoloko ekuxhasa.
Khawucinge ngoku: UEmily umxhase njani utata wakhe xa ebegula? Unokumnceda njani umntu onoxinezeleko?
Impilo Ngokwasemzimbeni Nasengqondweni Uxolo Nolonwabo Ulutsha Luyabuza Abafikisayo
Xa Umzali Egula
IBhayibhile ithi uThixo ukuthiyile ukungabikho kokusesikweni ize ichaze indlela esazi ngayo ukuba ubakhathalele abantu.